Merkel oo dhaleecaysay Maraykanka | Faaqidaad
By Editor on 16. June 2017 No Comment
Raysal Wasaaraha Jarmalka Angela Merkel waxay ka welwelsantahay hindisaha uu Aqalka Sare ee Maraykanku ku saarayo cunaqabataynta Ruushka inuu saamayn ku yeesho dhaqaalaha Midowga Yurub, Sida uu sheegay Jimcihii Afhayeenkeeda.
Arbacadii ayuu meel mariyey Aqalka Sare ee Maraykanku cunaqabatayn cusub oo ka dhan ah Ruushka, taas oo saamayn doonta mashaariic dhinaca tamarta ah oo ay si wada jir ah u fulinayaan Ruushka iyo Midowga Yurub.
Steffen Seibert oo ah afhayeenka Merkel ayaa sheegay cunaqabataynta loogu talagalay in lagu ciqaabo Ruushka ay sidoo kale wadada u xaari doonto ganaaxyo ka dhan ah shirkadaha Yurub.
“Waa muhiim inaysan tani dhicin” Ayuu yiri “Si guud ayaanu u diidanahay cunaqabatayn kasta oo saamayn doonta dhul ka baxsan dalka la saaray, taasoo la micno ah inay saamayn ku yeelan doonto dal sadexaad”
Merkel waxay dhaleecaysay qorshaha Maraykanka oo ah mid aanu iskaashi kala samayn xulufadiisa Yurub.
Merkel iyo Putin waxay ku kulmeen Sochi, Russia, May 2, 2017. © Alexander Zemlianichenko / Reuters.
Raysal Wasaaraha Austria Christian Kern iyo Wasiirka Arrimaha Dibada Jarmalka Sigmar Gabriel oo si wadajir ah qoraal u soo saaray Khamiistii waxay cambaareeyeen cunaqabataynta uu Maraykanku saarayo Moosko.
Warsaxaafadeedka ay soo saareen Gabriel iyo Kern waxaa xudun u ahaa mashruuca Nord Stream 2 oo lagu dhisayo dhuumo gaaska dabiici ah ka soo qaada Ruushka oo keena Jarmalka iyagoo soo mari doona Badda Balticka.
“Cida siinaysa tamarta Yurub waa arin u taal Yurub, mana aha mid u taal Maraykanka” Ayaa lagu yiri qoraalka ay sida wadajirka ah u soo saareen Kern iyo Gabriel oo mar soo noqday Wasiirka dhaqaalaha Jarmalka.
Aqalka Sare ee Maraykanku wuxuu cunaqabatayn saaray qaybo muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha Ruushka oo ay ka mid yihiin macdan qodidda, biraha, maraakiibta iyo tareennada.
Fadlan Like saar bogayaga Facebook.
Merkel oo dhaleecaysay Maraykanka added by Editor on 16. June 2017